नियमावलीप्रति कर्मचारीको विमति | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / नियमावलीप्रति कर्मचारीको विमति
नियमावलीप्रति कर्मचारीको विमति
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड February 13, 2018	0 107 Views
युगबो ध समाचारदात।
घो राही  । राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणको नियमावलीमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।
नियमावलीले अस् पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पे शा र से वा सुविधालाई ग्यारे न्टी गर्न नसके को भन्दै नियमावली संशो धन हुनुपर्ने माग गरे का छन् ।
सो मवार पत्रकार सम्मे लन गर्दै
अस् पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नियमावली सच्याउनुपर्ने स् थानीय दल तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको आपसी सहमतिको आधारमा प्रतिष्ठानको गतिविधि अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्र्रह गरे का छन् ।
पत्रकार सम्मे लनमा अस् पतालका निमित्त प्रमुख मे डिकल सुपरिटे न्डे न्ट डा. जनार्दन पन्थीले प्रतिष्ठान निर्माण नियामावली सरो कारवालाहरुबीच कुनै समन्वय नै नगरी आफूखुशी निर्माण गरे को बताउनुभयो  । उहा“ले भन्नुभयो – ‘कर्मचारीको माग कार्यरत करार र ज्यालादारी रो जगारको ग्यारे न्टी प्रतिष्ठानले गर्नुपर्छ ।’ उहा“ले पत्रकार सम्मे लनमार्फत यही माघ २२ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठानको बै ठक काठमाडौ ंमा मात्रै के न्द्रित भएको बताउनुभयो  ।
अस् पतालमा कार्यरत एक सय ६० जना कर्मचारीहरुको पे शा नियमावलीले संकटमा पारे काले यो तुरुन्तै सच्याउनु आवश्यक रहे को उहँ“ले बताउनुभयो  । प्रतिष्ठानले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको से वा सुविधालाई सरकारी ऐ नबमो जिम से वा सुविधा उपलव्ध गराउनुपनेर् माग गर्नुभयो  । उपकुलपतिले प्रतिष्ठान निर्माणमा स् थानीय कुनै दल, व्यक्ति र कर्मचारीहरुस“ग समन्वय नै नगरी अघि बढे काले यस् तो समस् या दे खिएको प्रष्ट पार्नुभयो  ।
प्रतिष्ठान निर्माण सहयो गी ने कपा माओ वादी के न्द्रका ने ता जीवन गौ तमस“ग पनि कुनै सल्लाह भएको छै न । स्थानीय ने ता तथा जनप्रतिनिधिहरु को हीसग उपकुलपतिले भे टघाट नगरी प्रधानमन्त्री र स्वास् थ्य सचिवबाटै आफूखुशी काम भइरहे को उहा“ले जानकारी बताउनुभयो  । पत्रकार सम्मे लनमा अस् पताल विकास समितिका अध्यक्ष शंकरसिंह थापाले उपकुलपतिले आफूस“ग पनि कुनै छलफल नगरे को बताउनुभयो  ।
यसैबीच अस्पतालका निमित्त मे.सु. जनार्दन पन्थीले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्ने काम नेपाल सरकारको भएको बताउनुभएको छ । सबै काम विधि र प्रकृया अनुसार हुन्छ र हुनपर्छ भन्दै उहा“ले यसमा आफूहरु अवरोधक नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
Previous: एमालेबाट दाङका तीन समानुपातिक सांसद
Next: न्यायको पर्खाइमा बेपत्ताका परिवार